Ny St. Regis San Francisco dia nanambara fonosana vaovao «Makà sidina» tsara tarehy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Ny St. Regis San Francisco dia nanambara fonosana vaovao «Makà sidina» tsara tarehy
culinary • Kolontsaina • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • fivoriana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny St. Regis San Francisco
Ny St. Regis San Francisco, adiresy voalohany ao an-tanàna ho an'ny filasiana lafo vidy, serivisy mahafinaritra sy haja tsy hita lany andro, dia nanambara fonosana fonosana vaovao ho an'ny mpandeha sy ny mponina mitady honenana mahafinaritra ary koa traikefa tsy manam-paharoa amin'ny lohasaha Napa mahafinaritra sy milamina.
Ny fananan-tany lafo vidy any San Francisco dia mivady trano honenana miaraka amin'ny traikefa tsy manam-paharoa Napa Valley ao amin'ny BRION sy Napa Valley Aloft.
Ilay fonosana vaovao manaitaitra dia antsoina hoe "Mandrosoa."
Ity fonosana mihaja ity dia misy fitaterana chauffeured, zava-maniry mahafinaritra amin'ny sakafo mahandro, ary na dia mitaingina balaonina rivotra mafana manokana aza.
Ny fonosana vaovao mitondra ny "Take Flight" dia misy fijanonana mandritra ny roa alina ao anatin'ny iray Ny St. Regis San FranciscoNy efitrano faran'ny Metropolitan mirehitra, fitaterana sedan mihaja manokana mankany sy avy any amin'ny Lohasaha Napa nomen'i Bali , traikefa fitsangatsanganana an-tsakafo maraina St. Regis kanto, fitsangantsanganana fiaramanidina mafana manokana natolotry ny Napa Valley Aloft, ary fanandramana fanandramana manokana sy manokana an'ny olona ao amin'ny trano fivarotana divay mihaja an'i Napa, BRION.
"Ny St. Regis San Francisco dia miavaka amin'ny mpizahatany izay maniry ny hiaina ny zava-kanton'ny fiainana an-tanàna any San Francisco, ny sakafo mahandro ary ny fiainana amin'ny alina ary koa ny hatsarana voajanahary, divay ary fitoniana ao amin'ny Lohasaha Napa," hoy i Lilian Wagner, Talen'ny Sales and Marketing ho an'ny hotely. “Faly izahay fa niara-niasa tamin'ireto orinasa malaza Napa Valley ireto hanome ny vahiny vintana hiaina ny tsara indrindra amin'ny" tanàna "sy" firenena. "
Ireo vahiny mamandrika ny fonosana "Take Flight" dia hanomboka ny fijanonany ao San Francisco, tanàna iray mitovy dika amin'ny fahasoavana, ny fomba ary ny kolontsaina. Rehefa tonga ao amin'ny The St. Regis San Francisco izy ireo dia hiala sasatra ao amin'ny iray amin'ireo efitrano fandraisam-bahiny nohavaozina amin'ny hotely, hankafy ny zava-bita ateraky ny trano, ary handray tolo-kevitra avy amin'ny ekipa mpiambina Les Clefs d'Or an'ny trano ahafahan'izy ireo miroboka ireo toerana manintona, trano fisakafoanana ary andrim-panjakana kanto indrindra ao amin'ny faritra SOMA (atsimon'ny Market Street) manodidina.
Vao maraina ny ampitso dia misy chauffeur miandry ny hitaterana ny mpitsidika ny lohasahan'i Napa, fantatra amin'ny tanimboalobony amina havoana an-jatony sy faritry ny divay malaza eran-tany. Ny fijanonana voalohany amin'ny andro dia Napa Valley Aloft, miorina amin'ny tantara Yountville Estate. Amin'ny fiposahan'ny masoandro, ny mpandeha dia hidina mitaingina lozam-pifamoivoizana an-tampon'ny rivotra mafana ary hisavoana ambonin'ilay tandindon'ilay faritra. Rehefa miantsona izy ireo dia hankafy sakafo maraina fitsangantsanganana voaomana manokana avy amin'ny ekipa mpanao sakafo St. Regis.
Aorian'izay dia handeha ho any BRION ireo vahiny, ilay orinasa mpamokatra zavamaniry napa Valley avy any amin'ny tompona Brion Wise, miorina eo amin'ny Sleeping Lady Vineyard malaza ao atsimon'ny afovoan'i Yountville. Natokana hamokarana tanimboaloboka tokana Cabernet Sauvignon ary hanehoana ny idealy Andriamatoa Wise amin'ny alàlan'ny fanangonana divay kely vita amin'ny tànana kely avy amin'ny toerana misy tanimboaloboka tsy manam-paharoa ao Napa Valley sy Sonoma, ny vahiny dia afaka manantena ny hankafy traikefa divay tena voahandro alohan'ny hiverenany any The St. Regis San Francisco.
Ny St. Regis San Francisco dia manolotra efitrano sy efitrano miisa 260, ireo rehetra ireo dia nohazavaina indray tamin'ny alàlan'ny orinasam-pananganana malaza any Toronto Chapi Chapo. Theredesign koa dia nifantoka tamin'ny fanatsarana ny fihaonan'ny St. Regis San Francisco 15,000 metatra toradroa sy ny toeran'ny hetsika, namorona faritra voadio sy milamina ary manavao izay natao hanamorana ny resaka sy fiaraha-miasa.
Ny vidin'ny fonosana "Take Flight" dia manomboka amin'ny $ 12,985.00. 14 andro mialoha ny fampandrenesana dia takiana amin'ny famandrihana, amin'izay fotoana izay dia tsy azo averina intsony ny vola aloany. Mihatra ny daty fahatapahana ary misy ny famandrihana manomboka izao hatramin'ny 20 desambra 2021. Raha mila famandrihana na famotopotorana dia miantso azafady amin'ny sampana famandrihana ao amin'ny hotely 415.284.4009.
Momba ny St. Regis San Francisco
Ny St. Regis San Francisco nosokafana tamin'ny Novambra 2005, nampiditra refy vaovao amin'ny haitraitra, serivisy tsy misy marimaritra iraisana, ary fahamendrehana maharitra amin'ny tanànan'i San Francisco. Ilay trano manan-tantara misy rihana 40, namboarin'i Skidmore, Owings & Merrill, dia ahitana fonenana tsy miankina miisa 102 izay miakatra 19 haavo ambonin'ny trano St. Regis 260-efitra. Manomboka amin'ny serivisy mpitondra zava-malaza, fitsinjaram-bahiny “anticipatory” sy fiofanana ho an'ny mpiasa tsy mandeha amin'ny laoniny hatramin'ny faran'izay tsara sy ny endrika anatiny nataon'i Chapi Chapo avy any Toronto, The St. Regis San Francisco dia manome traikefa ho an'ny vahiny tsy manam-paharoa. Ny St. Regis San Francisco dia miorina eo amin'ny 125 Third Street. Telefaona: 415.284.4000.